HomeTURKEYGobolka Marmara10 Balikesir
Wararka Balikesir iyo warka telefishinka
Dawlada Hoose ee Magaalada Balıkesir waxay sii wadaysaa hirgalinta mashruucyo gaadiid si loo helo gaadiid deg deg ah, badbaado iyo raaxo leh magaalada. Amarka Duqa Magaalada Yücel Yılmaz waxaa amar ku bixiyay taraafikada magaalada [More ...]
Degmada Balıkesir waxay ku beddelaysaa darbiyada la taaban karo darbiga birta ah ee ka hortagaya aragtida buundada Cunda markii codsi laga qaado shacabka. Muwaadiniinta ka gudbaya Buundada Cunda, oo u furey taraafikada baabuurta sanadkii 2017, 'waxaan rabnaa inaan aragno aragtida' [More ...]
Agaasinka Qorsheynta Gaadiidka iyo Nidaamka Tareenka ee Magaalada Balıkesir wuxuu sii wadaa dadaallada uu ka wado 20 degmo si loo hubiyo in gaadiidka muwaaddiniintu ay maraan waddooyinka aaminka ah. Awoodda Dawladda Hoose ee Magaalada Balıkesir iyo [More ...]
Buundada Balikesir Kiziksa waa hagaag: Duqa Magaalada Balikesir Yucel Yilmaz ayaa dhawray balanqaadkiisii, Manyas County Manyas wuxuu sameeyay wadada Kocasay, Dhismaha Buundada Wadada Gönen-Kızıksa ayaa la dhameystiray. Degmada Balıkesir [More ...]
Waxaa soo saaray Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, mid ka mid ah gawaarida ugu horreysa ee gaariga maxalliga ah wuxuu ahaa Degmadda Balikesir Metropolitan District. Aad bay ugu faraxsanaayeen inay ka mid noqdaan hay'adaha codsaday amarka koowaad ee gaadhiga guryaha. [More ...]
Fagaaraha Balıkesir, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Bandırma, Erdek iyo Gönen waxay ansax ka noqon doonaan jidadka magaalada ee jaamacadda, dugsiga sare, ardayda dhigata dugsiga hoose iyo kan sare ee billaha ah ee la diiwaan geliyo arjiga Smart Balkart 1 [More ...]